Mogadishu Journal » Iska horimaad xalay ka dhacay xarunta Baarlamaanka Puntland
Mjournal :-Taliska ugu sareeysa Booliska Dowlad Goboleedka Puntland ayaa si kulul waxaa ay uga hadleen dagaal sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo xalay ka dhacay Xarunta Baarlamaanka Puntland ee Magaalada Garoowe.
Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay Saddex Ruux,waxaana la sheegay in uu dhex-maray Ciidamo katirsan Booliska Puntland iyo kuwa ka amar qaata Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas Cabdi Xakiin Dhoobo-daareed.
Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Janeraal Muxudiin Axmed Muuse ayaa sheegay in Ciidamada ku sugnaa Xarunta Baarlamaanka Puntland ay ahaayeen maleeshiyaad ka amar qaata Guddoomiyaha Baarlamaanka,isla markaana Ciidamada amniga oo ka codsaday inay Xarunta ka baxaan ay rasaas ku bilaabeen.
Waxaa uu sheegay in dhowr mar uu guddoomiyaha baarlamaanka kala hadlay in Ciidamada uu meesha ka saaro,kadib cabasho ka timid Xildhibaannada baarlamaanka Puntland,hayeeshee dagaalkaas uu xalay dhacay.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in taliyaha qeybta Booliska Gobolka Nugaal loo diray,isla markaana wada-hadallo kadib ay suurtagashay in Cidiamadii Guddoomiyaha Baarlamaanka laga saaro Xarunta laguna wareejiyo Ciidamo Boolis ah.
Si kastaba dagaalka xalay ka dhacay Xarunta Baarlamaanka Puntland ee Magaalada Garoowe ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli maalmahaan uu jiray Guux ku saabsan in Xildhibaannada qaarkood ay mooshin ka wadaan qaata Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas Cabdi Xakiin Dhoobo-daareed.